Ukucabanga nje ngesibangela somlilo we-Notre-Dame: uMartin Vrijland
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-18 April 2019	• 17 Amazwana
Singathanda ukungacabangi, kepha uma ufunda izithombe, umlilo ku-Notre Dame ubukeka njengomlilo olawulwa kahle. Ungasho ukuthi kuzoba lula kakhulu ku-Macron ukuthi ukwazi ukudlala umholi omkhulu, njenge- Reichstagumlilo eBerlin kusukela ku-1933 Adolf Hitler nawo wangena kakhulu. Lo mlilo wawufakwa ezicathulweni zomkhulumeli waseDutch uMarinus van der Lubbe. Sizobona okufanayo eFrance manje? Ingabe sizobona, isibonelo, ukuthi "ucwaningo lubonisa" ukuthi isishoshovu se-vest yellow siyingxenye yethimba lokubuyiselwa futhi sishaya ngamabomu umlilo ngamabomu?
Ik wabhala kakade ukuthi umlilo wawuyisiphazamiso esihle esivela emlilweni owodwa ngesikhathi esisodwa e-Al-Aqsa, e-Jerusalem, kodwa eNingi yezoPilo (PsyOps) kunezansi ezimbili. Yebo akekho ubufakazi obukhona bokuthi kukhona i-PsyOp, kodwa akukho lutho olufakiwe kulezi zikhathi lapho, kusukela ekubukeni kwezobuchwepheshe, akukho lutho olusendleleni yokukhohlisa abantu ngokusebenzisa izibukeli zabezindaba.
Okokuqala, kubonakala ukuthi umlilo wawungeke ushise kakhulu kangangokuthi wawuncibilikisa ukukhwabanisa kwensimbi. Kwakungeyona yini inkinga nge-911; ukuthi ama-cores ensimbi ashisa kakhulu futhi ancibilika? Kungani le jetty ingaphatha ukushisa? Ngoba kwakungeke kushise kangaka? Ngamalangabi avulekile, izinga lokushisa ngeke lifinyelele izinga lokushisa lokushisa lensimbi. Umbuzo wukuthi lokhu kungase kwenzeke nge-911, kodwa ngaphandle kwalokho.
Le vidiyo ngezansi inikeza umfanekiso ozwakalayo womlilo. Funda kabanzi ngaphansi kwevidiyo.
Yini ehlabayo yukuthi kuphela uphahla lwamapulangwe oluvuthayo futhi uma ubheka izithombe emva kwalokho akusikho ukushaywa kwesoti ekwakheni isakhiwo. Isonto lalibonakala lingacabangi ngomlilo. Mina ngezinye izikhathi ngiye ngashisa imfucumfucu yezinto eziphilayo emgqeni wekhonkri ngemuva kwepulazi lami langaphambili. Uma ushisa umlilo ngomzuzu wehora, ungqimba lwangaphandle lokhonkolo luqala ukuqhuma futhi konke kuthunyiwe. Kungani ukwakhiwa kwe-Notre-Dame kubonakala sengathi kuhlanzekile futhi akukho monakalo obonakalayo? Ungasho ukuthi lokhu kungenxa yokuthi isibhamu somlilo sikwazi ukugcina umlilo ulawulwa kahle, kodwa lokho kuyinto ephawulekayo. Kuyiqiniso ukuthi sibonile izithombe zendawo yangaphakathi ebhujisiwe, kodwa mina kanye nami cishe singangeni esontweni ukuhlola izithombe zeqiniso futhi uma ubukela amavidiyo kukhona izinkuni ezishisayo kuphela phakathi kwesonto. Izibani zihlezi nje okungapheli ekukhanyeni kwesonto futhi eziningi zezithombe zihlanzekile futhi zihlanzekile endaweni. Amafasitela angenamabala angabonakala ahlanzekile futhi ahlanzekile futhi wonke asesefreyimu lewindi. Izindonga lapho zonke izinkuni zikhona zisezintombi. Ayikho uphawu lokusila.
Kuthiwani uma uphahla kwakudingeka lususwe noma kunjalo? Kuthiwani uma ukwakhiwa kwamapulangwe kwakonakaliswe yi-boktor noma i-woodworm? Ngiyavuma, kungumqondo wokuqagela, kodwa ngokusobala kubonakala sengathi ungumlilo olawulwa kahle, lapho umoya oqhuma khona nawo wawela kahle phakathi komlilo esikhundleni salesi sakhiwo. Yilokho okwakungenxa yokuthi iningi lokushisa livela phakathi kwendlu. Sonke sizwa futhi sifundile izindaba mayelana nokushisa komthofu wokuqhaqhazela, kepha mhlawumbe ama-mustard kumele awile emahlakalweni bese ewashisa futhi. Ngingasho ukuthi ngicabanga ukuthi ingaphakathi libukeka lihlanzekile kakhulu? (Buka ividiyo bese ufunde ngezansi)
Lapha siphinde sibhekene nombukiso omkhulu wezokuxhumana ngokuhambisana nobuchwepheshe obuye benza ukuba bakwazi ukubona umlilo olawulwa kahle, ukuze kuphinde kwehlise umhlaba. Futhi ukuthi njengoba nje ngiyazi, akukho ukufa okuye kwenzeka. Le bee koloni yakho Izinyosi ze-150.000 basinda emlilweni.
Manje ungase uzibuze ukuthi kungani ngicabanga ukuthi lo mlilo ulawulwa kahle nokuthi ungenziwa kanjani. Ngichaza ukuthi 'kungani' ngenhla. Ngichaza ukuthi 'kanjani' ngevidiyo ngezansi kusuka ku-NASA. Kungathatha amasonto ambalwa ukubeka amapaneli okuvikela ukushisa ngaphansi kokwakhiwa kwamapulangwe, kodwa akubonakali njengento engenakwenzeka. Ngicabanga ukuthi indaba enjalo isetshenzisiwe, ichaza okuningi mayelana nendlela esakwazi ngayo ukubona lo mbukiso omuhle womlilo futhi ichaza okuningi ngokuthi ngabe umlilo wawungenwe kanjani kahle. (buka ividiyo ngezansi bese uqhubeka ufunda ngezansi)
Iwebhusayithi citylab.com kubika okulandelayo:
Umlilo wawumfushane emibhoshongweni emibili eyakha izindlovu ezinkulu zamasonto, lesi siteshi esingafihliwe nguVictor Hugo I onesifumbu of Notre Dame. "Okubi kakhulu kugwenywe ngisho noma impi ayinqobe ngokuphelele," kusho uMongameli waseFrance u-Emmanuel Macron.
Yilokho izindaba ezinhle mayelana nobuciko be-Gothic: Izinto eziqinile, ezakhelwe ukuma nge-inferno.
"Akukhona ukuthi zenzelwe ukushiswa phansi, kodwa zenzelwe ukuthi uma uphahla lushisa, kunzima [umlilo] ukuba usakaze kulo lonke isakhiwo," kusho uLisa Reilly, uprofesa onobumbano wezakhiwo umlando eYunivesithi yaseVirginia kanye nesazi sezakhiwo zesikhathi esidlule. Phakathi neMinyaka Ephakathi, umcabango wawuwukuthi izigqoko zamatshe ezazisetshenziselwa ukuvimbela ukusakazeka komlilo. "
Ngokuzumayo isakhiwo setshe siyizinto 'ezinamandla' ngenkathi ukukhonjwa kwemibhoshongo emibili kuvela 'kungabi izinto eziqinile' ngokwanele. I-scaffolding yensimbi isalokhu imile, itshe ngisho ne-plaster, njengo Maria, ibonakala ingacacile futhi ngakho-ke singazibuza ukuthi singabe sinezikhangiso ezinkulu zezindaba.
Okuphinde kuvezwe esithombeni sephrofayela esithunyelwe ngalesi sihloko ukuthi amafasitela anziwe amnyama. Esikhathini (sesibili) ividiyo kulesi sihloko ungabona ukuthi ingilazi ekhonjiwe isesekhona. Kubonakala sengathi isihlungi sesithunzi sisetshenziselwe ukwenza amafasitela abonakale abe mnyama. Kodwa-ke, ngoba ingilazi kanye nokuhola kusalokhu kuqondile ngokuphelele, lokhu akulona iqiniso. Lokho kufanele kube khona noma kuphethwe kancane. Isihlungi sasisetshenziswe ngokucacile ukudala umqondo wokuthi igalazi elimhlophe libi (okungenjalo, bheka ividiyo).
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: thesun.co.uk, keational.ae
Kungani ukuguqulwa kwe-cardigan yesiFulentshi kungaba yinto eyedwa? Ubani ocabanga ngaleyo nto?
Ubani abahlukumezi be-yellow vest rioters eParis? Ubufakazi bevidiyo buyi-infiltrants
Amathegi: isishoshovu, brand, uphahla, lady, afakiwe, ophuzi, Gele, i-vest, izivande, Macron, I-Notre, ukusebenza, kwengqondo, psyop, Reichstag
18 April 2019 ku-10: 25
Ngomuntu, ngicabanga ukuthi konke kukhanya, ngoba ngisho naseNetherlands kunesibopho sokuba nomlilo wokucima umlilo lapho usebenza nabashayeli ephahleni eliphansi.
Ukwakhiwa kweName Dame nokwakhiwa kwephahla kuyizinto (noma zazikhona) izakhiwo ezimbili ezahlukene; Ngakho-ke kwakukhona isikhala esingenalutho phakathi kophahla kanye nokushayela. Indwangu yayenziwe ngamatshe, kuyilapho ama-skeleton ekwakhiweni kophahla enziwe ngokhuni. Ukufakwa kwamatshe kwakungaba (ngokuncane) kuvimbele ukushisa okwesikhashana. Isikhathi sizokutshela ukuthi umlilo usakazeka kanjani.
18 April 2019 ku-10: 38
Umhlali wasekhaya uMichel Dupont uthe labo abahlala bezungeza i-cathedral babethukuthele kakhulu imishini ayengekho esiteshini sokupaka amanzi emlilweni phezulu. "Iningi lethu libuza imibuzo mayelana neziphathimandla", "esho.
Ngibona izinto ezincane kakhulu kuma-movie ..
18 April 2019 ku-11: 01
Futhi njengoba kakade ithunyelwe ngaphansi kwesihloko esandulele, imisebenzi ebalulekile yobuciko isusiwe ngomlilo ...
Izithombe ze-16 Zemlando Ezikhishwe Kusuka Edameni LamaKatolika I-4 Days Before Fire
18 April 2019 ku-10: 42
Ngakho-ke ama-racks (amashubhu) agwetshwe ngemigodi lapho amanzi egeleza ngakho-ke ubamba i-rack eqondile, kubonakala sengathi i-rack ngesistimu yokunisela :-), kubonakala sengathi
Amabhodi asesikhundleni kufanele abe nesikhathi eside futhi avuleke nalabo abashisa amalangabi ashisayo.
Ukubuka umlilo nomlilo kubanjwe ngokukhethekile kulolu hlobo lokuvuselela okukhulu, kunabalindi bomlilo, izikhulu zokuphepha kusayithi ngokuqhubekayo.
Ngempela kubonakala sengathi ungumlilo olawulwayo, isiphakamiso esingezansi ...
18 April 2019 ku-11: 42
"I-scaffolding 'injalo' ifakwe emigodini .."
Ngiyaqonda umcabango wakho wokudala, kodwa lokho kungase kuvele. Khona-ke kufanele ubone ama-jet spray ezithombeni.
Ngicabanga ukuthi umbono wami mayelana nezihlangu zokushisa akukubi kakhulu.
Ngendlela, ngiyazibuza ukuthi bekungekho uhlelo lokufafaza ophahleni. Lokhu kubonakala sengathi kukhona into oyifaka esakhiweni esinjalo ophahleni lwezinkuni. Lokho kungenzeka ukuthi sekuvele kushaya umlilo.
18 April 2019 ku-16: 11
Amapayipu e-scaffolding ngokuvamile anikezwa izimbobo zokwakhiwa kwe-scaffolding, ngakho asikho isidingo sokubhoboza amanzi ukupholisa futhi.
Kodwa ku-2017 kwakukhona umemeza ohlangothini lwesisekelo se-Notre Dame esiseParis.
Emagazini wabo bacela usizo ku-2017 ngoba lesi sakhiwo sagubha futhi sasingasaphephile
kungaba yizivakashi ze-14.000.000 ngonyaka, bona ngezansi isixhumanisi sabangane be-Notre Dame
18 April 2019 ku-20: 47
Eminyakeni embalwa edlule, izakhiwo eziningana ze-monumnetal zishiswe ngomlilo (bheka, isibonelo, u-Windsor Caslle). Okuhlangenwe nakho kwabo bonke ukuthi ukugcinwa kwenzelwe. Uma ungeza umonakalo obonakala kimi ukuthi akulona kunzima ukuchitha imali encane yokuvimbela umlilo ngesikhathi somsebenzi wokunakekela futhi, ngokwesibonelo, ukuba abantu benze ukubhekwa komlilo ngokuqhubekayo. Izindleko kaningi izikhathi eziningi kakhulu kunokuvuselela kabusha. Noma kunjalo, umbuzo yingakho lokhu kungenziwanga. Kukhona abantu abaningi abaqaphelayo, abahlola futhi banciphise ingozi yephrojekthi (okuthiwa ukuphathwa kwengozi)
18 April 2019 ku-23: 01
19 April 2019 ku-08: 16
I-NL-ibuye ibe ne-clairvoyant:
19 April 2019 ku-09: 48
Umlilo ofanelekayo. Lelo phapha lushiswe kahle futhi lingavuselelwa lapho. Lokho akudingeki ukuba ukhokhe izigidigidi. Ukwakhiwa konke kusekhona ngokuphelele futhi kuqukethe insipho encane noma ayikho. Izindonga namanje zingenasici! Yiziphi izinto ezizenzekelayo lezo zepaneli ezingabonakali ezibonakalayo kulabo abakhuphuka ngempela?
19 April 2019 ku-10: 08
21 April 2019 ku-13: 46
Yebo, ukhetho lukaMichael Obama luyafakaza ngokuthi "Burning" 😀
20 April 2019 ku-23: 52
"Yiziphi izinto ezibonakalayo lezo zepaneli ezingabonakali ezibonakalayo kulabo abakhuphuka ngempela?"
Lokho kungabhekwa nje ngamapulangwe ensimbi ensimbi.
21 April 2019 ku-22: 17
@Kungani ufuna ukwazi lokhu?
Lokho kungenzeka ukuthi, uma usondeza ezithombeni uzobona ukuthi amapulangwe ayinengqondo kakhulu ukulungiswa kophahla.
Kukhona izinto ezimbalwa ezibonakalayo, amalangabi akhona emasekhondeni wokuqala aphuzi okwesibhakabhaka futhi ashiye umusi ohlanzekile okhombisa ukunamathisela noma okunye okukhanyekayo kakhulu. Kamuva, noma kunjalo, lapho izinkuni ezincane zivutha nalo, amalangabi aphendulela i-orange futhi kubhekwa umusi omncane omnyama.
Ukuphakama konke kuyihlaya uma ulandela ukwakheka kwemibhoshongo.
Kodwa yebo, ngeke sithole ngoba ubufakazi besusiwe kakade, ngakho-ke kumelwe sikholwe ukuthi abaningi baqhubeka bekholelwa kuNkulunkulu. Vele ugcine abezindaba (amandla)! kholwa 🙂
21 April 2019 ku-18: 37
Umlilo we-Crypt uphazamisa izinkonzo zeSonto lePalm eCathhedral of St. John the Divine
21 April 2019 ku-20: 56
23 April 2019 ku-18: 52
Ama-Israyeli azokubhekana nayo ngendlela ekhulu kakhulu, ngakho-ke kungaba nabantu abangcono kakhulu umbhoshongo omusha waseBhabhele '😀
I-Tel Aviv Skyscraper: Ukubuyiswa noma i-Tower of Babel noma Ukulungiselela Ithempeli Lesithathu?
I-Azrieli Group, i-Israel real estate kanye nenkampani ebambe iqhaza, yamemezela uhlelo lwaso lokukwakha isakhiwo esiphezulu se-Israyeli njengengxenye ye-Azrieli Centre Complex e-Tel Aviv. Ukuphuma ezindabeni ze-91 nokufinyelela ezinyaweni ze-1,150 ngasezulwini, kulinganiselwa ukuthi i-Spiral Tower izothatha iminyaka eyisithupha ukuqedela izindleko ezilinganiselwa ku-$ 666 million.
« Izitho eziphrintiwe ezivela ku-DNA yomzimba ziyiqiniso: bheka lapha inhliziyo yokuqala ephrintiwe ye-3D
Lapho ohulumeni beqala umphakathi wezokuxhumana noma i-intanethi uma kwenzeka ukuhlaselwa (njengalabo abaseSri Lanka), empeleni usuvele uyakwazi okwanele »
Ukuvakashelwa okuphelele: 12.415.109
Ingabe kuzoba nempi phakathi kwe-US ne-Iran ngokushesha okukhulu manje?
Owayekade Disney Channel asterisk uthi wake wahlukunyezwa yi-Hollywood pedophiles
Ucingo oluphuthumayo! Kufanele sibeke imithombo yezindaba ngaphandle kokusebenza MANJE!
Ingabe i-911 yayingumsebenzi ongaphakathi? UDe Telegraaf unezimpendulo kuyo yonke imibuzo yakho!
UMartin Vrijland op Ingabe kuzoba nempi phakathi kwe-US ne-Iran ngokushesha okukhulu manje?
i-chris-ingane op Ingabe kuzoba nempi phakathi kwe-US ne-Iran ngokushesha okukhulu manje?
SandinG op Yini iqiniso ngokubulawa kukaDerk Wstersum futhi kusho ukuthini lokho 'ngofakazi bomqhele'?
Joyina abanye ababhalisile abangu-1.635